I-Porn ibe yindlela yokuziphatha okubi Umvuzo weZiseko
Ikhaya impilo Ukuziphatha koMlingo
Uphando olutsha lu bonise ukuba ukuziphatha kwaye kungekhona nje izinto nokuba ngumlutha. Zingenza ukuba uphawu olufanayo luguqulwe kwinkqubo yobuchopho yengqondo ebizwa ngokuba yi-cocaine okanye utywala okanye i-nicotine. (Bona ngezantsi). Ezi ziphatha ziquka ukugembula, imidlalo ye-intanethi, kunye nemidiya yoluntu njenge-Facebook kwaye mhlawumbi iinkqubo zokuthandana ezifana neTinder okanye iGrindr.
Nantsi i iphepha ngoososayensi be-neuroscientists abakhokelela kwihlabathi abacacisa ukuba kutheni iphonografi kwi-intanethi kufuneka ithathelwe ingqalelo njengengxaki yokulutha. Ibhaliwe ngokudibeneyo ngabaphandi abaninzi kwicandelo lokuziphatha gwenxa kwezesondo. Iyabuza ukuba ngaba isifo esitsha se-CSBD siphantsi kwecandelo "lokuPhazamiseka kuLawulo lokuPhazamiseka", apho lihlala khona ngoku. Ababhali bacebisa ukuba eyona nto iqinisekileyo, inkxaso esele ikho ye-CSB 'njengengxaki yokulutha.'
Oku kuyifutshane, iifayile ezithandwayo kubantwana malunga umlutha wezobisi. Oku yi imifanekiso eninzi echaza ngokwenene izinto ezisiseko.
Uninzi lwezi ntlupheko luyinto ebonakalayo yenguqu 'engaphezu kwendalo' yembuyekezo yendalo okanye i-reinforcers yemvelo yokutya, ukudibanisa kunye nesondo. Ukutya okungenamsoco kunye namazinga aphezulu eetyuwa, iswekile kunye namafutha 'kukutya okungaphezu kokusesikweni' kwimivuzo yekhalori ephakamileyo abaye bayinika ingqondo ngenxa yokunqongophala; Imidiya yoluntu ifana nomxholo ogqithiseleyo wokubambisana, amakhulu 'abahlobo' kwiqhosha; kunye ne-intanethi ye-intanethi kunye ne-parade yayo engapheliyo yokuzikhethela 'iintsana ezishushu' yinto ekhethekileyo yesondo.
Ngeziyobisi, abasebenzisi badinga umlinganiselo ophezulu ukuze bafumane 'okufanayo'. Nge-intanethi, abasebenzisi abangaphezu kwexesha badinga ukuveliswa okungaphezulu okanye ubuninzi obuninzi ukuba bavelele impembelelo efanayo. Icandelo lezonyango livuyisa kakhulu ukubonelela oku.
Njengoko izinga le-dopamine lihamba ngokulindela 'umvuzo,' ngokukhawuleza iwa kwakhona emva kokufumana umvuzo. Abasebenzisi kufuneka baqhubeke bechofoza kwizinto ezibonakalayo ukuze bahlale befumana umvuzo. Ukuba siqhubeka sinyanzelisa ubuchopho ukuba senze ukugcinwa rhoqo, kugxininisa inkqubo kwaye ikhuphe ukuveliswa kwemveliso njengomlinganiselo wokukhusela. Ukuba siqhubeka sixhalaba, kunjalo, ingqondo ikhetha ukuba le ngxakeko yentsholongwane kwaye ixhomekeke kwi-satiation ('inokwaneleyo'). Ngako oko, amazinga aphakamileyo e-dopamine adala ukukhululwa kweprotheni ebizwa ngokuthi i-Delta Fos B. Oku kwakha kwindlela yokubuyisela ubuchopho ukuze sisincede sigxininise, khumbula kwaye uphinde umvuzo obalulekileyo.
Iziganeko ezine zidibanise neenguqu zenyama yomsebenzi wengqondo ngenxa yenkqubo yokulawula. Zezi:
Inkqubo yolawulo lwempembelelo-Ukungakhathali
• Izijikelezo ezingasebenzi
'Ukuhlaselwa' kuyimpendulo encinci kumnandi, ngakumbi kwimiphumo yemvelo, njengokutya okanye ukuxhamla nabanye. Ngokuqhelekileyo ubuchopho obunxulumene nomlutha buguqula isaziso sabasebenzisi be-porn. Baziva bexinezelekile, banobuhlungu, baqeshwe kwaye bahluleki. Ukutshintshwa kwe-dopamine ukutshintshwa kunye nezinye iinguqu zishiya umsebenzisi onzima ukuthobela ubuncwane kwimihla ngemihla kwaye 'ulambile' imisebenzi yokukhulisa i-dopamine kunye nezinto. Bafuna ukukhuthazwa okukhulu nakakhulu ukufumana i-buzz. Basenokuchitha ixesha elide kwi-intanethi, ukuphucula iiseshoni ngokuguqulwa, ukubukela xa bengakhange bahlambulule, okanye bafune ividyo epheleleyo ukuphela. Kodwa ukuxoshwa kwezinto kungathatha uhlobo lokunyuka kwimibala emitsha, ngamanye amaxesha kunzima, kungahambi, kungadibanisi. Khumbula: ukutshatyalaliswa, ukumangaliswa kunye nokuxhalabisa kuvelisa i-adrenaline i-dopamine kunye nokwandisa ukuvuswa kwesondo.
Ngokwahlukileyo, ekuphela kwento ethi ihoye kwaye iphakamise umoya wethu yinto yomnqweno wethu, isimilo sokuziphatha okanye into ekhethiweyo. Kungenxa yokuba siye 'saziva' kakhulu kuyo. Ubuntununtunu bubangela iminqweno enamandla okanye ukungazi nto kwimemori yolonwabo, 'imemori euphoric', xa yenziwe yasebenza. Ikhonkco lokukhumbula inkumbulo yingqondo 'edibanisa iingcingo kunye, evuthayo kunye' kwinkqubo yokusebenza. Inkumbulo yemeko yePavlovian yenza ukuba umlutha unyanzelise ngakumbi kunayo nayiphi na eminye imisebenzi ebomini bomlutha.
Ukunxibelelaniswa kweentambo zentsholongwane kubangela ukuba inkqubo yokuvuza ibuyiselwe ekuphenduleni imixholo okanye iingcamango ezinxulumene nomlingo. Umlutha weCocaine unokubona ushukela kwaye ucinge nge-cocaine. Umntu onxilisayo uvala i-clink yeiglasi okanye ucola ubhiya njengoko edlula ibhishi kwaye ngokukhawuleza ufuna ukungena.
I-intanethi yezilwanyana ezinobungozi, iinjongo ezinjengokuguqula ikhompyutha, ukubona i-pop up, okanye ukuhlala yedwa, kubangela ukuba unqwenela ukuthanda iifoto. Ngaba umfana ngokukhawuleza kakhulu (i-libido yangempela) xa umfazi wakhe, umama okanye u-flatmate uya kuthenga? Akunakwenzeka. Kodwa mhlawumbi uvakalelwa ngathi uhamba ngokuzenzekelayo, okanye omnye umntu ulawula ingqondo yakhe. Abanye bachaza impendulo yoononophelo ephathekayo njengokungena kwi-tunnel ephuma kuphela: i-porno. Mhlawumbi uvakalelwa ngokukhawuleza, intliziyo yokukhawuleza, kunye nokuthuthumela, kunye nento enokuyicinga ngayo ngokungena kwiwebhusayithi ye-porn oyithandayo. Le mizekelo yeendlela ezixhasayo zokulutha umonakalo ezisebenzayo kwinkqubo yokuvuza, ukukhala, "yenza oku ngoku!" Nangona umngcipheko wokwenza isigwebo socansi awuyi kubayeka.
Ubuthakathaka, okanye ukunciphisa umsebenzi wengqondo kwimimandla ye-prefrontal, inobuthathaka amandla okanye ukuzithiba, ekujonganeni nezifiso ezinamandla. Oku kwenzeka njengesiphumo se-grinkage kwimiba ebomvu nemeko emhlophe, kwimimandla engaphambili. Le nxalenye yengqondo esinceda senze iibheke ekukhethweni okungahambi kakuhle ixesha lethu elide. Kusinceda sithi 'hayi' kuthi xa siziva sisilingo. Ngaloo mhlaba usuphelile, sinako amandla obuthathaka bokubona kwangaphambili imiphumo. Inokuvakalelwa njenge-war-of-war. Iindlela ezinokumemeza zithi 'Ewe!' ngelixa ubuchopho obuphezulu buthi 'Hayi! Hayi kwakhona!' Ngeengxenye ezilawulayo zolawulo lobuchopho kwiimeko ezibuthathaka, indlela yokulutha umlingo ihlala iphumelela.
Iintsholongwane zitshatyalaliswa ngokukhawuleza ekugqithiseni. Akunalo kuphela ukuba baninzi i-dopamine ebaqhuba ukuba bathathe ingozi (i-pedelerator pedal is depressed fully), kodwa i-lobes yangaphambili ayilunganga ngokupheleleyo, (iibhuleki azisebenzi kakuhle).
Izijikelezo ezingasebenzi. Oku kwenza ukuba uxinzelelo oluncinci lukhokelela kwiminqweno kwaye lubuyele kwakhona ngenxa yokusebenza kwindlela enamandla eqondayo.
Ezi ziqhamo ziyingundoqo yazo zonke izidakamizwa. Omnye ofumana isohlwayo loononophala wathi: 'Andisoze ndonele yinto engonelisiyo kwaye ayinakuze indanelise'
Ukurhoxa. Abantu abaninzi bakholelwa ukuba umlutha uhlala ubandakanya ukunyamezelana (isidingo sokwenyusa ngakumbi ukufumana isiphumo esifanayo, esibangelwa kukungakhathali) kunye neempawu zokurhoxa ngokukhohlakeleyo. Ngapha koko, akukho mfuneko yokuba umlutha- nangona abasebenzisi be-porn banamhlanje bahlala bexela zombini. Luyintoni lonke uvavanyo lovavanyo lweziyobisi, 'Ukuqhubeka nokusetyenziswa nangona ziphumo ezimbi'. Lobu bungqina obunokwethenjelwa bokulutha.
Ukuba ungathanda ulwazi olungakumbi malunga nophando nokunyuka, nqakraza Apha (indawo yangaphandle, ivula efasiteleni elitsha).
<< Iziyobisi Ukubuyisela kwakhona >>